7 Influencer Kushambadzira Maitiro Anotarisirwa mu2021 | Martech Zone
7 Influencer Kushambadzira Maitiro Anotarisirwa mu2021
Chitatu, June 9, 2021 Chitatu, June 9, 2021 Alexander Frolov
Sezvo nyika painobuda kubva mudenda uye nemhedzisiro yasara mukumuka kwayo, kushambadzira kwekusimudzira, kwete kusiyana neruzhinji rwemaindasitiri, ichazviwana ichishandurwa. Sezvo vanhu vakamanikidzwa kuvimba pane chaiko panzvimbo pezviitiko zvemu-munhu uye vakapedza nguva yakawanda pasocial network panzvimbo yezviitiko zvemunhu nemisangano, kushambadzira kwekumanikidza kwakangoerekana kwave pamberi pebanza remukana wezviratidzo kusvika vatengi kuburikidza nevezvenhau mukati nzira dzinonzwisisika uye dzechokwadi. Zvino nyika painotanga kushanduka ikaenda kune yepashure-denda renyika, kushambadzira kwekusimudzira kuri kuchinjirawo kune zvakajairika, kutora nezvakawanda zvakagadziriswa zvakagadzira iyo indasitiri mugore rapfuura.
Aya ndiwo maitiro manomwe anokurudzira kushambadzira anogona kutarisira kuona muhafu yepiri ya2021 apo nyika inofamba ichipfuura denda:
Maitiro 1: Mabhiza Ari Kuchinja Ad Shambadzira kune Vanokurudzira Vashambadzi
Ipo COVID-19 ichinonoka kukura kwese kweiyo indasitiri yekushambadzira, kushambadzira kwekushambadzira hakuna kunzwa mutoro zvakanyanya sevamwe maindasitiri.
63% yevatengesi vane chinangwa chekuwedzera yavo yekukanganisa kushambadzira bhajeti mu2021.
Kufuridzira Kushambadzira Hub
Sezvo pasocial network mashandisirwo ari kuramba achikura pamazhinji maindasitiri akasiyana siyana, mabrandari ari kuendesa kushambadza kushandisa kubva pasiri pamhepo kuenda ku online chiteshi sezvo marondera anonzwisisa kushambadzira midhiya enhau ndeimwe yenzira dzakanakisa dzekubatana nevateereri pamhepo uye nekugovana mameseji avo. Kushambadzira kushambadzira kunova kunotonyanya kukosha sezvo mabrand anotsvaga mikana yekubatana nevateereri vavo munzira chaidzo uye dzechokwadi online.
Maitiro 2: Vatengesi Vari Kuchengeta Ziso Rekuswedera paMetric
Influencer yekushambadzira metric ichaenderera ichinyanya kuve yakasimbiswa zvakanyanya, uye semhedzisiro, mabrandari anoenderana nemunhu wega anokurudzira kushambadzira kuita uye ROI yeavo anokanganisa. Uye, nemakiresi aona kukwidziridzwa mukuita kubva kune vanokurudzira kushambadzira mushandirapamwe zvakatsiga pamusoro pegore rapfuura, mabhaisikopu ekushambadzira mabhajeti anofanirwa kuwedzera. Panguva imwecheteyo, pamwe nekuwedzera kwekushandisa, kunouya padyo neziso pane metric. Aya mametric anowedzera kuve anotsoropodza sezvo vashambadziri vachironga yavo mishandirapamwe pamwe nekuongororwa kwevanokurudzira vateereri, chiyero chekubata, post frequency, chokwadi chevateereri, uye makiyi ekuita mashandiro.
Iko hakuna kuramba kukanganisa kana iwo akakurudzira anoshanda. Chimbofunga izvi Nicki Minaj's Instagram posvo aine iye akapfeka inopenya pink Crocs, iyo yakazopunzika Crocs 'webhusaiti nekuda kwekuwedzera kwewebhu traffic pakarepo zvichitevera post. Vashambadziri vanofanirwa kuisa mepuro yavo maererano nekongiri KPIs inosanganisira Brand kuziva, kuwedzera kutengesa, kubatana kwemukati, webhusaiti traffic, uye kukura kwevezvenhau kuvepo.
Maitiro 3: Virtual Influencers Vari Kukura Mukurumbira Pakati Pezvikwata
Vanokurudzira chaivo kana vanogadzira makomputa vanoshanda senge chaiwo-ehupenyu, vangangove ihwo hunotevera "chinhu chikuru" mukukurudzira kwekushambadzira pakati pezvitsiga. Aya marobhoti-anokonzeresa akagadzirwa nehunhu, hupenyu hwakagadzirwa hwavanogovana navo nekutevera uye voita kubatana kuburikidza nemagariro enhau nevatengi. Aya maficha anokwezva isarudzo inokwezva yezvigadzirwa nezvikonzero zvishoma. Kutanga, zvinyorwa zvitsva zvinogadzirwa zviri nyore nevagadziri vemifananidzo, vachiisa iyo irobhoti-inokonzeresa chero kupi zvako pasirese chero nguva, kubvisa kudiwa kwekufamba kwevechokwadi-hupenyu hwevanokurudzira.
Kunyangwe izvi zvave kunyanya kukosha mugore rapfuura, sezvo denda rakakonzera kufamba kudzikira zvakanyanya, maitiro acharamba achienderera. Zvinoenderana nekutsvaga kwekuchangobva kuitika, isu takaitisa mune edu eThe Top Instagram Virtual Influencers mu2020 mushumo, marobhoti-anokanganisa anoshanda kusvika kune vateereri vavo uye kuvhara mukaha pakati pezvikwata nevateereri vavo. Mukuongorora kwedu, takaona kuti vanonyengerera vane hukama hwakapetwa katatu kubatanidzwa kwevanonyanya kukurudzira vanhu. Chekupedzisira, vanokanganisa vanochengetedzeka maererano nezita rechiratidzo, sezvo marobhoti aya achikwanisa kudzorwa, kunyorwa, uye kuongororwa nevakagadzira. Virtual vanokurudzira vanopa mukana mudiki wekugumbura, kusanzwisisika kana kukakavara munhau midhiya kutumira izvo zvinogona kukanda mucherechedzo mukukuvadza kudzora maitiro.
Maitiro 4: Iko Kune Kukura Kukwira MuNano uye Micro-Influencer Marketing
Nano uye ma micro-influencers vari kuwana mukuzivikanwa sezvo ivo vari kuratidza kubatana kwakasimba nevateereri ve niche.
Nano-vanokurudzira vane 1,000 kusvika ku5,000 vateveri
Micro-vanokurudzira vane zviuru zvishanu kusvika zviuru makumi maviri vateveri.
Kazhinji vateveri veaya nano uye ma micro-vanokurudzira vanonzwa kuti vanokurudzira vari vechokwadi uye vari vega, vachipa zvirimo, mameseji, uye zvigadzirwa zvechigadzirwa izvo zvinonzwa zviri zvechokwadi, zvichipesana nevazhinji vanokurudzira, vanogona kupomedzerwa kubatsirwa kubva pesimba. Aya nano uye ma micro-influencers vane hunyanzvi mukukudziridza kwakadzika kubatana nevateveri vavo, vari zvakare vanobatanidzwa zvakanyanya. Idzi nharaunda dzakabatana dzinotsigira, dzinovimbwa, uye vanokurudzira vanogona kukanda mu "hushamwari" munharaunda yavo kuti vaongorore uye vape mhinduro. Mabhizimusi madiki akajaira kurova-madhiraivha, asi makambani makuru ari kutanga kushandisa aya mapoka evanokurudzira.
Muna 2020, 46.4% yezvakataurwa pamusoro pezita uchishandisa iyo hashtag #ad yakaitwa neakaundi maakaundi ane vateveri 1,000 20,000-XNUMX.
Maitiro echishanu: Vanopesvedzera Ndivo Kusimudza Zvemabhizimusi Ezekutengeserana Kukurudzira Kuvhurwa Kwavo Vavo Brands / Mabhizinesi
Vezvemagariro midhiya vanokurudzira vanopedza makore vachivaka avo vanotevera, vachisimbisa hukama nevateereri vavo, uye nekugadzira zvemukati zvinoenderana niche yavo. Aya mapesheni anotorwa sevatengi vega uye kurudziro gurus yekutevera kwavo. Kukurudzira zvigadzirwa kutyaira mari inyanzvi yekukurudzira, uye se-e-commerce uye midhiya enhau inopindirana kazhinji, kuwedzera kwesocial commerce kuri kuwana traction uye ichiratidza kuve mukana unobhadhara wevanokurudzira.
Vafuridzi vari kushandisa mari pakutengeserana nekutanga zvigadzirwa zvavo nemabhizinesi, vachishandisa simba ravo rekutengesa zvigadzirwa. Panzvimbo yekusimudzira zvigadzirwa zvemamwe mabrand, aya anokurudzira ari "kutendeuka matafura" uye kukwikwidza mugove wemusika. Vafuridzi vari kushandisa kwavo kubatana uye kuvimba kuvimba nekukura kwemavaki avo uye mabhizinesi, chinova chinhu chakashayikwa nevatengesi.
Maitiro 6: Vashambadzi Vari Kubhadhara Kutarisisa Kukurudzira Kubiridzira Kwekubiridzira
Kubiridzira pakati pemapuratifomu enhau, ayo anosanganisira kutenga vateveri, kutenga zvavanofarira uye makomenti, kutenga nyaya dzenyaya, uye kupindura pods, iri kuita nzira yayo yekumberi kwekushambadzira kwevanokurudzira. Kuwedzera ruzivo pamusoro pehunyengeri kune vese vanokanganisa uye kwavo kutevera inhanho yakakosha yekudzora hunyengeri chiitiko. Imwe yemagariro enhau chikuva yakazvipira kunyatso tarisa kubiridzira ndeye Instagram. Ipuratifomu iyi yakamisa zvirambidzo izvo zvakarambidza Iyo Tevedzera / Tevera hunyengeri, uye nekudaro uchienzaniswa ne2019, avhareji muzana maakaundi e Instagram akabatanidzwa mukubiridzira akaderera ne8.14%. Nekudaro, iyo nhamba yevanokurudzira yakakanganiswa ne kubiridzira kuchiri kukwirira (53.39%), uye 45% yevateveri ve Instagram mabhoti, maakaundi asingashandi, uye vateveri vazhinji. Maakaidhi ekunyepedzera maakaunzi anogona kudhara vanoshambadzira mamirioni emadhora gore rega, uye sekushambadzira kushambadza kuri kuwedzera mukushambadzira kwekushambadzira, kuona kubiridzira kunowedzera kukosha.
Maitiro 7: TikTok Inotarisira Kuwana Kutapira sePuratifomu Yekutengesa
TikTok ndiyo inonyanya kuzivikanwa midhiya yekubudirira nyaya ye2020 ine 689 mamirioni emwedzi vashandisi vanoshanda. Iyo yekudyidzana midhiya chikuva yaive ne 60% inowedzera mune vanoshanda vezvenhau vashandisi gore rapfuura, ichiita iyo inokurumidza kukurumidza pasocial media chikuva pasirese. Iyo app, iyo yakatanga sekutamba nemumhanzi app yevechiri kuyaruka, kubva ipapo yakura ikafarira vanhu vakuru, mabhizinesi, uye marandi.
TikTok ipuratifomu yakapusa inobvumira vashandisi kugadzira zvirinyore, kutumira mavhidhiyo, uye kuda nekutevera kazhinji, izvo zvinokurudzira kuita kwakakwirira kupfuura mamwe mapuratifomu enhau akadai se Instagram. Maitiro avo akasarudzika ekudyidzana mushandisi anopa ese maviri mabhenji uye anokurudzira mutsva mikana yekushambadzira uye kugona kusvika kune yakakura mushandisi base. HypeAuditor anofanotaura TikTok ichave nevanopfuura mamirioni zana emwedzi vashandisi veUS mu100.
Chinhu chakakosha chekutarisa kana uchifunga kuti ndeipi chikuva yekushambadzira yaunoshandisa kunzwisisa vateereri vako. Kubudirira kwemasimba ekushambadzira emakambani kunowanzoenderana nekuziva vateereri vako uye maitiro avo ekuti vatarise. Kana vateereri vako vanyatso tsanangurwa, kusarudza kuti ndeipi chikuva yekutengesa kuti usvike kune vateereri vako iri sarudzo iri nyore. Makore ezera akasiyana anogona kushandisa mamwe mapuratifomu ekutengesa, nekudaro kusarudza chikuva nezera rako rekutungamira izano rakachenjera.
43% yevashandisi vepasirose Instagram vari pakati pemakore makumi maviri nemashanu nemakumi matatu nemana uye vanopfuura hafu yevashandisi veTikTok (25%) vari pasi pemakore makumi maviri nemana makumi mana nemana makumi matatu nepfumbamwe nepakati pakati pe34 ne69, izvo zvinoita kuti vanhu vezera iri rive boka rakakura kwazvo revashandisi.
Muchidimbu, Instagram inobatsira vateereri vakakura, nepo TikTok inofarira vateereri vadiki.
Dhawunirodha HypeAuditor's 2021 State of Influencer Marketing Report Download HypeAuditor's Instagram Fraud Report
Tags: hypeauditorkuchinjainfluencer kushambadza shandisakufurira kubiridzirakushambadzira kushambadzirakukurudzira kubiridzira kwekushambadzirainfluencer kushambadzira hubkukurudzira maitiro ekushambadzirakukurudzira maitiro ekutengesamicro-influencermicro-vanokurudziranano influencernano influencersNicki manajzvekutengeseranaTikToktiktok kushambadzirakushambadzira kushambadziravanokurudzira
Jun 17, 2021 pa4: 37AM
Maitiro makuru ekushambadzira anokurudzira. Ndatenda nekunyora ino inoshamisa chinyorwa.